Gufgaf|Online अनुरागपछि दोस्रो प्रोजेक्टको तयारीमा एलिजा
अनुरागपछि दोस्रो प्रोजेक्टको तयारीमा एलिजा
सिनेमा अनुरागबाट डेब्यु गरेकी अभिनेत्री एलिजा गौतमले पहिलो सिनेमामा राम्रो काम नगरेको भन्दै धेरै आलोचना खेपिन् । उनलाई धेरैले सिनेमामा अभिनय सिकेर मात्र आउनु पर्ने सुझाव दिए । सिनेमा हेरेर अरुले दिएको सुझावलाई एलिजाले सकारात्मक रुपमा लिएर अघि बढेकी छिन् ।
सबैको सुझाव र सल्लाह अनुसार एलिजा यतिबेला दोस्रो प्रोजेक्टको तयारीमा जुटेको विशेष स्रोतले जनाएको छ । अबको प्रोजेक्टमा भने एलिजाले अनुरागमा गरेका गल्तीहरु सकेसम्म नगर्ने तयारी गरिरहेकी छिन् । हालै मात्र हामीसँगको कुराकानीमा एलिजाले दोस्रो प्रोजेक्टमार्फत आफूले सकेसम्म राम्रो दिने कोशिष गर्ने बताईन् । विशेष स्रोतका अनुसार उनको दोस्रो प्रोजेक्टले दर्शकहरुलाई सरप्राईज दिनेछ ।
यतिबेला एलिजा बाहिर ब्यानरका सिनेमाको तयारीमा छिन् । उनी अब केही समय बाहिर ब्यानरका सिनेमामा काम गरेर मात्र आफ्नो ब्यानरमा सिनेमा निर्माण गर्ने तयारीमा छिन् । उनको डेब्यु सिनेमा अनुरागका प्रस्तुतकर्ता ऋषिराज धमला अर्थात उनका श्रीमान थिए ।
अभिनेत्रीको काम हेरौँ
दुईवटा सन्तानकी आमा बनिसकेकी एलिजालाई सिनेमामा प्रवेश गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । उनलाई परिवारले साथ दिएपनि सिनेमा उद्योगमा प्रवेश गरेपछि भने केही अप्ठ्यारो पर्यो । धेरैले उनलाई विवाहित र दुईवटा सन्तानकी आमाको रुपमा हेरे जसले एलिजाको चित्त दुख्यो । हामीसँगको कुराकानीमा पनि एलिजाले आफूलाई सिनेमा उद्योगको यो पक्ष मन नपरेको बताईन् ।
उनले एउटा अभिनेत्रीलाई सिनेमामा अनुबन्धित गर्दा ऊ विवाहित होकी हैन ? छोराछोरी पाएकी छ कि छैन ? भनेर नहेरी उसको काम हेर्न जरुरी भएको बताएकी छिन् ।